ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံအတွက်အကောင်းဆုံး Hydraulic outboat tilt ချုံ့စက် နင်
ဟိုက်ဒရောလစ် outboat စောင်းကိရိယာကိုချုံ့
ထုတ်ကုန်များနိဒါန်း ၁။ မြင့်မားသောအလွိုင်းအလွိုင်းအလူမီနီယမ်ဆလင်ဒါနှင့်အနည်ထိုင်များနှင့်ခိုင်ခံ့သောသံမဏိအထောက်အကူပြုလှံတံသည်အဂတိလိုက်စားမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အတူ CNC စက်များအားဖြင့် 2.Machined ။ ၃။ မော်တာနှင့်တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောပမာဏနှင့်ထိရောက်မှုရှိပြီးသေးငယ်သောအလေးချိန်ရှိခြင်း။ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အတူ 4. အဆင့်မြင့်နှင့်ကမ္ဘာ့အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်ခတ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ L1 L2 L3 H1 H2 H3 H5 ABC အစပျိုးစက်၏စွမ်းဆောင်ချက်နယ်ပယ် YLQ-D15 452.5 417.5 271 ...
မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်အတူ CNC စက်များအားဖြင့် 2.Machined ။
မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အတူ 4. အဆင့်မြင့်နှင့်ကမ္ဘာ့အမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်ခတ်။
သင်သည်လှေစီးရန်အသစ်ရောက်ရှိနေပါကသင်၏လှေ၏မော်တာလည်ပတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ချုံ့ခြင်းနှင့်စောင်းခြင်းဟူသောဝေါဟာရများကိုကြားဖူးပေမည်။ မကြာခဏစောင်းခြင်းနှင့်တိကိုထူးဆန်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတို့သည်သင်၏အပြင်ပန်းမော်တာတွင်အမှန်တကယ်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်စေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်နှိပ်နိုင်သည့်ခလုတ်များသို့မဟုတ်ခလုပ်များကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုမည်သည့်အစောင်းခြင်းနှင့်ချုံ့ခြင်းများကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန်လှေလည်ပတ်ပုံ၏အခြေခံကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်သင်၏လှေသည်အပြိုင်ဖြစ်သင့်သည် အဆိုပါရေလမ်းမှ။ မင်းရဲ့လှေကတောင်မှပိုပြီးချောချောမွေ့မွေ့ပြေးနိုင်တယ်။ လှေတစ်စင်းကိုရေတစ်ခွက်ဖြတ်ပြီးသင်ဖြတ်သန်းနေတာကိုသင်မြင်တွေ့ခဲ့မှာသေချာပါတယ်။ အဆိုပါအင်ဂျင်ချလေထုထဲတွင်လေးကို။ ဒီဟာကတောက်ပပြီးမြန်ဆန်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်လုံးဝမမှန်ပါ။ သငျသညျကိုပင် Keel အပေါ်လှေနှင့်အတူအများကြီးပိုကောင်းမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုရနိုင်သည်။ အတိမ်းစောင်းမှုစနစ်ကိုစနစ်တကျစီမံခြင်းသည်၎င်းကိုဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနှင့်အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
Trim ဆိုသည်မှာသင်၏ propeller shaft သည်လှေနှင့်သက်ဆိုင်သောထောင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်သည်သင်၏အင်ဂျင်၏ထောင့်ကိုကျဆင်းစေရန်ဒါမှတိကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုအနုတ်တိအဖြစ်လူသိများသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏လှေ၏လေးသည်ကျသွားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်သည်သင်၏အင်ဂျင်၏ထောင့်ကိုတက်သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအပြုသဘောချုံ့ဟုလူသိများသည်။ သင်ဤသို့ပြုလျှင်သင်၏လှေ၏လေးသည်တုန့်ပြန်လိမ့်မည်။
ချုံ့ခြင်း၏ထောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်သင်၏လှေ၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းထက်ပိုမိုတာ ၀ န်ရှိသည်။ ချုံ့ခြင်းနေရာသုံးနေရာနှင့်သင်၏လှေအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
ထို့အပြင်ချုံ့အဖြစ်လူသိများ။ ဒါကသင်၏လှေရဲ့လေးကိုလျော့နည်းစေသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်အားလေးလံသောဝန်များရှိပါကပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေယာဉ်ဆွဲသည်။ ရေဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်သွားခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစီးနင်းနိုင်သည်။ သို့သျောလညျးသငျ, ကိုချုံ့ခြင်းသင့်လှေညာဘက်ဆွဲထုတ်စေလိမ့်မည်ဟုသတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်တိုးမြှင့်သောစတီယာရင် torque ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြားနေချခြင်းသည်သင်၏လှေကိုလည်းလျှော့ချလိမ့်မည်။ ချုံ့ခြင်းနှင့်ထွက်ခြင်းနှင့်မတူသည်မှာဒီမှာထောင့်မရှိ။ ပန်ကာရိုးသည်ရေလမ်းကြောင်းနှင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လောင်စာဆီအသုံးပြုမှုနှင့်မြန်နှုန်းအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
ရှေ့သို့ girth ဂီယာအုံဂီယာကို double helix
ပေါ်ကို drive ကိုစုဝေး
2019 လက္ကားစျေးနှုန်း China High Precision Crown ...
တရုတ်လက်ကား China Automatic Reverse Cleanin ...